Tourism Seychelles uye Kirabhu Med Inosimudzira Kwayo Kwese MuItaly
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Tourism Seychelles uye Kirabhu Med Inosimudzira Kwayo Kwese MuItaly
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Tourism Seychelles muItari
Yevashanyi Seychelles inomiririra hofisi muItari yakabatana neClub Med, yakabata nhevedzano yezviitiko kusimudzira Seychelles kuyambuka Italy pamberi pechiziviso chekuti Indian Ocean paradhiso zviwi ndeimwe yenzvimbo nhanhatu uye nyika nhatu dziri kunze kweEurope vagari vemuItaly vanogona kuenda ku .
Yakagamuchirwa neTurkey Seychelles, makumi matatu evamiriri vechiitiko chega chega chiitiko vakatakurwa pamusoro pekudya kwemasikati uye vhidhiyo kuratidzwa mumhepo yekuenda.
Kufarira kwekuenda kwakanyanya kwazvo kubvira kuvhurwa neHurumende yeItari yemukoto wevashanyi kuenda kuSeychelles.
Iyi nhevedzano yezviitiko zvemu-munhu yaive chiitiko chakanakisa chekusimudzira kuziva kwezvitsuwa.
Chiitiko chekutanga chekutengeserana chakaitirwa muRome kuhotera Metropole musi waGunyana 22, pakati peguta, ichiteverwa neimwe muNaples musi waGunyana 24 kuClub Rosolino. Chiitiko chekupedzisira chakaitika kuNYX Hotel muMilan munaGunyana 28.
Akabatwa ne Tourism Seychelles mumiriri wekushambadzira muItaly, Danielle Di Gianvito, uye Club Med's Commerce Director B2B uye M&E Italy Anne-Laure Redon, vamiriri makumi matatu vekufamba kwechiitiko chega chega, vakasarudzwa pakati peClub Med vakaroorana, vakatakurwa pamusoro pekudya kwemasikati uye vhidhiyo kumhepo kwekuenda. Izvi zvakateverwa nemasangano enetiweki.
Chiitiko chevatengi muMilan chakazotevera musi waGumiguru 5 chakaitwa pamwe nekubatana neGattinoni agency network, muhofisi yayo iri pakati peMilan. Chiitiko ichi chaisanganisira chisvusvuro uye mharidzo uye chakapindwa nevatengi vanoshandisa mari yakawanda yesangano rekufambisa, uye nedzimwe nhengo dzenzvimbo yekufambisa.
Kufarira kwairi kuenda kwakanyanya kubvira kuvhurwa neHurumende yeItari yemukoto wevashanyi kuenda kuSeychelles uye ino nhevedzano yezviitiko zvemunhu-yaive yaive yakanaka mukana wekusimudzira kuziva kwezvitsuwa senzvimbo yakakwana yezororo nekusundira kutengesa zororo.
Club Med yakasimbisawo spike yekubhuka kwetemu yekupedzisira ya2021 uye semester yekutanga ya2022. "Tichifunga nezvezvinoitika, Club Med inotarisira kuwedzera mavhoriyamu kana achienzaniswa neyepamberi peCovid nguva yekutanga sehafu yekutanga ya2022. Izvi zvakare nekuda kwerwendo rwezvinhu zvitsva izvo Club Med iri kugadzirira kuvhura pamusika uye nekudyara muClub Med Exclusive Unganidzo, iyo inosanganisira Seychelles. Kukosha kweClub Med Exclusive Unganidzo kwakakura ne15% zvichienzaniswa nemakore maviri apfuura uye ikozvino ma2% ezvese zvekutengesa. Sezvo COVID-30 yachinja maitiro ekufamba, vatengi vava kutsvaga kuvanzika uye nenzvimbo dzine nzvimbo huru kwavanogona kufema rusununguko rwekunze, "Mai Anne-Laure Redon vakadaro.
Itari yakagara iri imwe yemakambani anotungamira evashanyi eSychelles uye yaive yechina yepamusoro sosi yekuenda, ichiunza 27,289 vanosvika mu2019 isati yatanga COVID, asi ichidonhera ku2,884 muna 2020 sezvo COVID nemitemo yekufamba yakabata Italy. Kubva muna Gumiguru 10, 2021, 1,029 vashanyi vaive vafamba kuenda kuSychelles kubva kuItari.